Sida aynu isticmaali kartaa motor stepper - Shiinaha Changzhou ay jeceshahay Motor
control motor Stepper waa qalab in ay gacanta ku booska, xawaaraha iyo Xuddunta ah drive a farsamo. Waxaa loogu talagalay gacanta ku mooshin of matoorrada korontada. Waxay leedahay isu gudbinta si toos ah iyo buuga bilaabo iyo joojinta engine ah, iyo xulashada iyo sixitaanka ee xawaaraha.
Sidoo kale la filayaa in ay doortaan labada weeraryahanka ama beddeli wareeg ka dhanka ah overloads iyo unu, iyo qabsato Xuddunta ah. motor kasta oo koronto ku qalabeysan yahay jaangooyaha in uu leeyahay hawlaha iyo qaababka kala duwan. Stepping gacanta ku motor ayaa sidoo kale ku caawin kara ilaaliyo weyn ee matoorrada leeyihiin dollar ama ka weyn xaalad hadda. Waxa lagu sameeyaa ilaalinta Relay dollar ah ama heerkulka Satlaytaka Relay. Fiyuusyada iyo mawjadaha circuit ayaa sidoo kale muhiim u ah ilaalinta ka badan hadda. wadayaasha baabuurta Automatic waxaa bixisey la shido xadka si ay u ilaaliyaan mishiinka.
Qaar ka mid ah ilaaliyaal motor adag waxaa loo isticmaalaa si loo xakameeyo matoorrada xawaaraha iyo Xuddunta ku xiran ka. In gacanta ku xidhan-loop a, xakamaysada ah soo saarta boos sax ah in tirada engine ah on a lathe-maamulaa. xakamaysada motor ayaa si sax ah boos qalab goynta ku salaysan profile pre-qorsheeyay. Waxa kale oo magdhow ah xaaladaha load kala duwan iyo ciidamada oo dhib badan ka caawin joogteeyo booska uu ka qalab.
ilaaliyaal Motor ku salaysan yihiin waxa ay ka tageen inay sameeyaan. Waxaa jira gacanta motor buugan, gacanta motor si toos ah iyo gacan ku haynta motor ka fog. Iyada oo ku xidhan soo saaraha, kontaroolada motor noqon karaa oo kaliya ku bilowday oo ay joojiyaan. Laakiin waxaa jira wadayaasha badan oo xukuma engine la qaababka badan. control An motor koronto loo kala saari karaa sida ay nooca motor in lagu eryi ama ay gacanta ku hayso. Tani waa mooshin Howlsocodsiinta gacanta, matoorrada tallaabo, talantaalli ah ee hadda la joogo ama AC ama buraash DC ama brushless DC magnet joogto ah.
waqti Post: May-29-2018